काठमाडाैँ । नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुले खान छुटाउनै नहुने खानाहरुको बारेमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनले आठ थरी खानाहरुको सूची तयार पारेको छ ।
नेपालमा मुख्यगरि काठमाडौंमा धेरै नै लोकप्रिय यी खानाहरुको स्वाद मुखमै झुन्डिने बताँउदै सिएनएनले नेपाल भ्रमण गर्दा यी परिकारहरु चाख्न पर्ने बताएको छ । सिएनएनको सूचीमा मम, दालभात, थुक्पा, योमरी, जुजुधौ दही, मासको बारा, चटामरी, टिङ्मो एण्ड आलु फिङ अटाएका छन् ।
तिब्बती खानाको रुपमा नेपाल भित्रिएको मम टमाटरको चटनीको साथमा खाँदा मिठो हुन्छ । मासु र सब्जी भरिएको सानो सानो डल्ला हुने ममले मुखै रसाउने आजकाल चिज, आलु लगाएतका अन्य धेरै अप्सनहरु पाइने सिएनएनले जनाएको छ । काठमाडौंमा स्टिम, फ्राइड र कोथे गरी ३ थरी ममहरु पाइने सिएनएनले जनाएको छ ।
माछा आकारमा बन्ने योमरी चामलको पिठोबाट बनाइएको हुन्छ जसको भित्र चाकु लगाएत मिठो खानेकुरा भरिएको हुन्छ । यो खेतीपाति थन्क्याएपछि चाडपर्वमा खाने एक लोकप्रिय खानेकुरा हो जुन योमरी पुन्हीको अवसरमा खाइन्छ ।
यो नेपालको एकदमै लोकप्रिय खाना हो । नेपालमा दालभात थाली सेटको रुपमा सर्भ गरिने पनि सिएनएनले जनाएको छ । मासको दाल वा सिमीलाई धेरै बेरसम्म मन्द आगोमा पकाएर त्यसलाई हिमालयन जडिबुटी जिम्बुले झानिएको हुन्छ ।
४. जुजु धौ
जुजु धौलाई अङ्ग्रेजी रुपान्तरण गर्दा किङग््स कर्ड हुन्छ , यो भक्तपूरको एकदमै विशेष खानेकुरा हो । भैंसीको दुधबाट बनाइने यो दहीमा मह मिसाइएको हुन्छ र त्यसलाई माटाको भाँडामा राखिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई न्यानो ठाँउमा पातलो कपडाले छोपेर नजमुन्जेल राखिन्छ ।
थुक्पा एक प्रकारको चाउचाउ सुप हो जुन तिब्बतबाट नै काठमाडौं प्रवेश गरेको हो । यसमा हातैले बनाइएको उसिनेको चाउचाउ, सब्जीहरु र मासु मिसाइएको हुन्छ । यसमा नेपाली गरम मसला र खुर्सानीको पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । बिशेषगरी यो जाडो महिनामा खाइन्छ ।
६. मासको बारा
नेपालमा केही पनि त्यस्तो हुदैंन मासको बारा जस्तो । यो लाइट प्याटीहरु मासबाट बनाइएको हुन्छ जुन एकरात भिजाइन्छ त्यसलाई पिसेर मसलासँग मिसाएर त्यसलाई सानो वृत्ताकार रुपमा तोरीको तेलमा पकाइन्छ । अन्तिम मिनेटमा एउटा अण्डा फ्टाएर त्यसलाई पकाइन्छ । यो काठमाडौंको ठूला रेस्टुरेन्टमा भन्दा साना साना भट्टिहरुमा पाइन्छ ।
यो पातलो रोटी जस्तो चामलको पिठोले बनाइने चटामरीमा माथि किमा, अन्डा लगाएत अन्याकुराहरु सजाइएको हुन्छ । यसलाई नेपाली भर्सनको पिज्जा भन्दा पनि फरक पर्दैन । यो विशेष नेवारी खाना आजकाल काठमाडौंका धेरै रेष्टुरेन्टहरुमा पनि पाइन्छ ।
८ टिङ्मो (टिःमम) र आलु फिङ
यो खाना पनि तिब्बतबाट नै काठमाडौं भित्रिएको हो । टिङ्मो स्टिम गरिएको ब्रेड र सुपमा चोपेर खान मिल्ने गरि बनाइएको हुन्छ । आलु फिङमा चाउचाउ, आलु र सब्जीहरुको तातो झोल बनाइएको हुन्छ ।